विशेष सम्पादकीय : बडादशैंले मानवीय अचेतनाभित्रको रावण वध गरोस् « Janata Samachar
विशेष सम्पादकीय : बडादशैंले मानवीय अचेतनाभित्रको रावण वध गरोस्
नयाँ कपडा,मिठो खाना, परिवारजन तथा इष्टमित्रसँगको भेटघाट लगायत दशैंमा गरिने अनेकन सांस्कृतिक कृयाकलाप उत्सवलाई उल्लासमय र माधुर्य बनाउने कौतुक हुन् । बडादशैं सांस्कृतिक उत्सवले सिंगो जीवनशैलीलाई वृन्दावनको रासमय आनन्द प्रदान गर्छ । प्रकृतिमा छाएको शारदीय आभा र मनोहर सुन्दरताले पुलकित मानवीय मन दशैंको बहुविध लालित्यमा रम्छ । यो आवरणमा देखिने बडादशैंका छटा हुन् ।
दशैंको मीमांसित मर्म हो ‘असत्यमाथि सत्यको जीत ।’ त्यसकारण दशैंमा अन्याय, अत्याचार, शोषण दमन र उत्पीडनको प्रतीक अर्थात् आसुरी प्रवृत्तिका रावणको पुतला दहन गर्दछौं । शास्त्रमा वर्णित रावणको उहिल्यै वध भयो । यसर्थमा हामी बाहिरी रावणको खोजीमा हुन्छांै । आफैँभित्र रहेको रावणसँग मनुष्य प्रायः पराजित हुन्छ । बाह्य जगतको रावणलाई पराजित गर्न सजिलो छ । संगठन निर्माण, फौज गठन वा जनविद्रोह निम्त्याएर दानवीय प्रवृत्तिका शासन वा शक्तिशाली आतातायीलाई नामेट पार्न सकिन्छ । तर मनुष्य आफैँले आफूलाई जित्न सक्दैन । आफ्नै अन्तस्करणमा सुशुप्त रहेको दानवी प्रवृत्तिको वशिकरणमा पर्छ । अन्तर मनको रावणसँग प्राय पराजित हुन्छ मनुष्य ।
परपीडक चित्तभित्र रावणीय बीज छुपेको हुन्छ । अन्तर मनको सुक्ष्मातिसुक्ष्म निरीक्षण बिना अगम्य अन्तस बोध हुँदैन अत्यन्त दुरुह छ । मनुष्य मध्यमा छन् । मनुष्य अग्रगामी भयो भने बुद्धत्वतर्फ उक्लिन्छन् । पश्चगमनमा गयो भने पशुतामा पतन हुन्छ । झट्ट हेर्दा समाजमा अपराध बढेको जस्तो देखिन्छ तर एकमुष्ट परिणाम भनेको मानवताको पतन र समाजको क्षयीकरण हो ।
सुसंस्कृत, संस्कारित र सभ्य समाज निर्माणको महान अभियानमा हाम्रा सांस्कृतिक चाड पर्वको निर्माण भएको हो । सांस्कृतिक छटा सामाजिक र सामूहिक जीवन पद्धति पनि हुन् । सत्मार्ग र मानव कल्याणलाई मानवीय जीवन दर्शन र सामाजिक मूल्यको आधारशीला बनाउन दशैं जस्तो चाड पर्वको महत्वपूर्ण भूमिका छ । दशैंको टीका र जमरासहितको अग्रजको आसिक दिने परम्पराभित्र असत्यमाथि सत्यको जीतको मर्म अंकित छ ।
दुर्गा,देवी,रावण,सुर असुर दशैंका यी सबै पात्रहरु मिथ हुन् । यो पर्वको महत्व बढाउने विम्वहरु हुन् । सधैं राम्रो कर्म गर्न र सत्यपथ अवलम्बन गर्न मनुष्य जातिलाई प्रेरित गर्न दशैंका यी कथाहरु कथेका हुन सक्छन् ,कथालाई रोचक र यथार्थपरक बनाउन विभिन्न पात्रहरु विम्वका रुपमा आउनु स्वभाविक हो ।
यस सत्यलाई नजरअन्दाज गर्दा अहिले पनि दशैं तिहार मात्र होइन हरेक चाडपर्वहरु कुनै धर्म,समुदाय र जाति विशेषको हुन थालेका छन् । चाडपर्वहरुलाई समेत विभाजित गरिन थालेका छन् । चाडपर्वलाई विशुद्ध धर्म वा आस्थाको घेराभित्र संकुचित पार्दै लैजादा त्यसभित्र अन्तरनिहीत सामाजिक र सांस्कृतिक महत्व विराट हुँदा हुँदै पनि साँघुरो बन्दै गएको छ । त्यसैले दशैंमा वर्णन गरे झैं अब हामीले आफ्नै अन्तर मनको आसुरी प्रवृत्तिको वध गर्ने आत्मबल जगाउने प्रेरणा बटुल्नु छ । बडादशैंले मानवीय अचेतनाभित्रको रावण वध गरोस् । पारिवारिक सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनुको साथै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न मद्धत पु¥याओस् । विजया दशमीको मंगलमय शुभकामना ।
म्यानपावर सञ्चालकले दिए प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँचको धम्की
काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीहरुले गर्ने असुली धन्दा नयाँ भने होइन । पछिल्लो समय विभिन्न म्यानपावर
महामारीका समयमा समेत म्यानपावरको धन्दा यथावत, दुई म्यानपावरमा प्रहरीको छापा
काठमाडौं । काठमाडौंका विभिन्न म्यानपावर कम्पनीमा बैदेशिक रोजगार विभागले छापा मारी कागजात नियन्त्रणमा लिएको छ
कोरोनाका नाममा बीमा कम्पनीको कमाइ, कुन बीमा कम्पनीले कति खाए ?
-मदन ढुङ्गाना काठमाडौं । जब नेपालमा औलामा गन्न सकिने कोरोना संक्रमितहरु थिए, त्यतिखेर बीमा कम्पनीहरुको
खुशीराम पाख्रिन : समाजवादको आन्दोलनका सुरिलो योद्धा
जनताका प्रिय गायक र सर्जक खुशीराम आस्याङलाई पनि कमसेकम तिनै वर्गले कालान्तरसम्म सम्झिरहनेछन् ।
देशभर पश्चिमी वायुको प्रभाव : वर्षा…
आज सबैभन्दा कम जुम्लाको न्यूनतम तापक्रम माइनस दशमलव ८ डिग्री र सबैभन्दा धेरै धनगढीको न्यूनतम तापक्रम १२ दशमलव ५ डिग्री…
शेयर बजार बढ्यो, परिसूचककाे नयाँ उचाई
अहिले शेयर बजारका लागि हरेक हिसाबले उपयुक्त महोल बनेकाले लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ ।
विदेशी पर्यटककाे पहिलाे गन्तव्य ‘ठमेल बजार’मा…
पर्यटक विहीन बनेको ठमेल बजारमा केही दिनयता स्वदेशी उपभोक्ताको चहलपहल बढेको ठमेलका व्यपारीहरुले बताएका छन् ।
शैलुङ इन्टरप्राईजेज फेरि अदालतमा
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले गत कात्तिक २८ गते ३० हजार मेट्रिक टन बराबरको दोस्रो ठेक्कामा पनि जमानत जफत गर्ने निर्णय…
कसैले चाहँदैमा नेकपा कमजोर हुँदैन : नेपाल
भारत र बङ्गलादेशको उडान खुला गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
कोरोना बीमाका नाममा बीमा कम्पनीको बदमासी, भुक्तानी पाउन महाभारत
नेकपा विवाद : ओलीले अध्यक्ष छोड्छन् वा प्रधानमन्त्री ?
जाडोसँगै बढेको चिसोमा असाध्यै गुणकारी अमला
‘आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशी पर्यटन प्याकेज बनाऔं’
थप १,९४८ जना काराेना संक्रमण, ९२ प्रतिशत निकाे भए